Kaamirooyinka qarsoon ee sawirka muuqaal qarsoon ee sawirka muuqaal - Amniga guriga Nanny Cam (B) (SPY002) | Xalka OMG
Kamaradda Ammaanka ee aan la Aqbali karin: si qarsoodi ah loogu dhajiyay dhejiska si loo dhigo sawirka sawirada sida qurxinta guriga, waligaa ma heli kartid sawirada kamaradaha kamaradaha xitaa aad eegto, mid ka mid ah kamaradaha qarsoon
Heer Sare Heerka Farriinta Muuqaal Fikradaha: Sawir-gacmeedku wuxuu leeyahay guduud dub ah oo aan la arki karin oo uu qariyo ballan-qaadka habeenkii oo muuqaal ah ilaa 15 ilaa cagaha 25 Wadarta mugdiga. (LED aan iftiimin isticmaalka)
Qalabka Capacity Capacity 10000mah ee batari: Manhajka rikoodhka maalin kasta ilaa saacadaha 30 iyo habeenkii sawirada sawirada illaa saacadaha 10. PIR dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa firfircoon ee firfircoon wuxuu bilaabmaa illaa sanadka 2
Waxqabadyo badan oo loogu talagalay isticmaalka kala duwan: Diiwaangelinta macaamilka PIR jirka jirka, Diiwaan galinta sasabadda, Diiwaangelinta Loop ayaa loo qoondeeyey in lagu buuxiyo feylkii ugu da'da ahaa ee ugu cusbaa. (Loop iyo codka ayaa loo rogi karaa ama si fudud u bixi karaa markaad rabto)
Tayada 720P HD Super Clear Tilmaamaha:1280 * 720P at 30fps ku taageerto kaadhka yaryar illaa 32gb (ha ku darin), ku qor taariikhda / saacada biyaha oo la hagaajin karo
Buuxinta 10000mah Baydkiisa: Ku dheh fariin wanaagsan inaad ujadaad joogto ah!
Ku dhejisan 10000mah Super Battery: Manhajka rikoodhka maalinwalba ilaa saacadaha 30 iyo habeenkii duubista muuqaalka ilaa saacadaha 10. Ama PIR dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa firfircoon ee codbixinta ilaa illaa 2.
Kaamiradani shakhsi ahaaneed waa shuruuf ku haboon nidaamka nabadgelyada guriga, xitaa haddii ay jirto adeegga korantada ee korontada.
Wakhtiga buuxa ee buuxinta: saacadaha 20 ee 2A adapter USB.
Dhaqan fiican oo hagaagsan: Ku dheel dheel wanaagsan dhamaan kubadaha ama indhaha ...
Si qarsoodi ah loogu dhajiyay dhejiska si loo dhigo sawirka sawirada sida qurxinta guriga, marnaba ma heli kartid sawirada kamaradaha xitaa markaad eegto, oo ka qarin badan kamaradda ilaalinta shakhsi ahaaneed.
Dhaqdhaqaaqa fudud oo la taaban karo, oo la dhisay iyo dusha laga xirxiray, waxaad u furi kartaa inay istaagto miiska, sidoo kale waxay ku dari kartaa derbiga. Ma aha oo kaliya in loo isticmaalo kamarad qarsoon, laakiin sidoo kale sida qurxinta guriga.
Tayada 720P HD Super Clear Til Video: 1280 * 720P Taageerada 30fps
Kaarka Micro SD ilaa 32gb (kuma jiraan),
Codka ayaa loo rogi karaa ama banaan karaa wakhti kasta si loo ilaaliyo asturnaanta inta lagu jiro duubista
Ku qor taariikhda / watiga taariikhda / wakhtiga la hagaajin karo.
Fiiro gaar ah: Kumbuyuutarku ma shaqeeyo iyada oo aan lagu rakibin kaadhka micro-sd, waxaad u baahan tahay inaad si gaar ah u iibsato ka hor inta aadan isticmaalin.
Waxay leedahay saameynta aragga ee habeenkii ugu fiican ee kuyaala loto 1mm, oo leh tiknoolajiyada LED-ka, kamaraduhu ma iftiin wax iftiin ah habeenkii inta lagu jiro shaqada.
Aragtida habeenkii runta ah: isbarbardhigaan alaabada la midka ah ee muuqaalka muuqaalka habeenkii, waxay xitaa ka shaqeyn kartaa dhammaan mugdiga madow.
Diiwaanka Qaadista Sawir-qaadista PIR Motion video: ku saabsan daqiiqad 1 faylka
Si joogto ah u qor: ku saabsan daqiiqada 10 ee faylka
Diiwaangelinta Loop: Looma baahna in laga walwalo kaadhka xusuusta ayaa buuxsami doona, wuxuu si toos ah ugu qori doonaa faylasha ugu da'da leh ee cusub, fadlan qaado faylasha muhiimka ah ee fiidiyowga waqtigiisa.
SPY002 - Sawir Sawir ah Sawir gacmeedka qarsoodi ah
1834 Wadarta Views 21 Views Maanta
صدا تصویر ضبط شده به صورت مخفی (1)